Nke 1 Akụkọ Akụkọ Na-akwụghachi ụgwọ | Relọ Nkwụghachi :gwọ: Lovehụnanya, Mmekọahụ & Ntanetị
Home Mba. 1 na-akwụ ụgwọ akụkọ
Enwere ọtụtụ ihe na Reward Foundation, n'ihi ya, anyị kpebiri ịmalite ',gwọ wegwọ' dịka nchịkọta akụkọ nke ga-apụta ugboro isii kwa afọ karịa nke ọ bụla. Anyị na-tweet kwa ụbọchị dị ka o kwere mee ma na-eme kwa izu akụkọ akụkọ kwa. Ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla ịchọrọ ịhụ ka anyị kpuchie, kwuo ya. All nzaghachi na-anabata gị Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Ego Obere Lottery
"Apple, Google, Facebook? Ha bụ n'ezie ndị na-ere ọgwụ ọjọọ "
Obi ọmịiko: Review Book
Ogologo oge, ezumike ...
Njikọ n'etiti Porn na Loneliness
Porn n'ime mmekọrịta
Ụlọ akwụkwọ nzuko omeiwu nke Scottish na akwụkwọ nkà mmụta na akwụkwọ
OZI, VIEWS na INTERVIEWS
Onyinye Ụgwọ Ụgwọ ahụ nwere obi ụtọ ịkpọsa na ọ natara onyinye site na Idebe echiche mmiri nke nnukwu ego Lottery. Ọrụ anyị nwere aha 'ihe-it-say-on-the-tin' Ịmụta Ihe Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ Na-emetụta n'etiti Ndị Ntorobịa nọ na Scotland. Ebumnuche bụ ịmepụta atụmatụ nkuzi maka ụlọ akwụkwọ dịka akụkụ nke mmemme Personal & Social Health Education (PSHE).
Anyị ga-elekwasị anya na ikike porn iji mee ka ụbụrụ nwee ike ịmalite ụbụrụ na ahụike, inweta, mmekọrịta na omempụ. Anyị ga-egosipụtakwa ụzọ iji kwụsị porn wee wuo nkwụghachi. Obi dị anyị ụtọ ịnwe onyinye nke ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ole na ole n'aka iji nyere anyị aka ịzụlite ihe na-atọ ụtọ, mmekọrịta na ihe kwesịrị ekwesị afọ.
Gụọ ihe ọma a isiokwu banyere otú Facebook si eji ụbụrụ eme ihe n'ụbụrụ gị. Ndị na-enyocha ndị na-ahụ maka enyemaka na-akpọ ndị otu nwata nwoke ka ha jiri ikike obi anyị na-eme ihe iji mee ka anyị banye ma mee ka anyị laghachi. Ha na-eme ọtụtụ ijeri na anyị, karịsịa ndị na-eto eto, nwere ike ịkwụsị ịda mbà n'obi, nchegbu na enweghị afọ ojuju na ndụ.
Anyị na-arụsi ọrụ ike na mkparịta ụka nke nyochaa vidio. Anyị mere ndị na-eto eto na-eto eto na-abịa n'ihu Robbie Gordon nke ndị Scottish Iche ndi nzuzuụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ na Christian McNeill, bụ ihe na-akpali akpali nke si n'aka Ihe ndị dị mma. Anyị amalitekwala usoro nwayọ nwayọ ịmụ etu esi edezi vidiyo. Atụmatụ anyị bụ ịnwe ụfọdụ n'ime ajụjụ ọnụ ndị a na weebụsaịtị n'ime izu ole na ole sochirinụ. Anyị ga-tweet mgbe ha dị n'ịntanetị.
Ọ ga-amasị anyị ikwu ezigbo akwụkwọ a kpọrọ Obi ọmịiko - Kwụsị Ịkụ Onwe Gị na Hapụ Nchebe Behind site n'aka prọfesọ nke mmepe mmadụ bụ Kristin Neff. Anyị nụrụ ka Kristen na-ekwu okwu banyere akwụkwọ ya na ogbako n'afọ gara aga, ọ masịrị ya. Ọ ghaghị imeri ụfọdụ nsogbu ndị dị na ndụ ya, ọ bụghị nanị na nkwupụta. Akwụkwọ ahụ na-enye ihe ngwọta siri ike maka ịlụso ịda mbà n'obi, nchegbu na mkparị onwe onye nke na-abịa na ibi na omenala siri ike na ịsọ asọ. Enwere ule a nwalere ma nwalee na nbudata di egwu maka n'efu. Ọ bụ akwụkwọ na-arụ ọrụ na nke bara uru.
Ogologo oge, ịhapụ...
TRF kwuru goodbye na Jamie Wright na David Martin, ụmụ akwụkwọ abụọ ahụ sitere na Mahadum Napier n'afọ a. Ha na-enyere anyị aka na mmepe weebụsaịtị anyị ma anyị nwere olile anya na ọ nwetara ha ahụmịhe ọrụ bara uru. Jisie ha ike na ọkwa ọzọ nke ọrụ ha.
GỊNỊ BỤ ỤBỤRỤ NA-EKWU banyere ...
E nwere ugbu a na-egosi na ịlụ di ma ọ bụ nwunye gị ụtọ bụ ihe na-enye obi ụtọ karịa ịpịa onye ọzọ ma ọ bụ gị onwe gị. Strona-akụ aka na-eme ka ọnụọgụ obi. Nke a bụ ihe maka NHS iji tụlee dị ka ihe ọzọ maka ụgwọ dị elu na mmetụta dị egwu nke ọgwụ. O jikọtara nke ọma na ihe anyị maara banyere njikọta mmekọrịta. Lee Ebe a maka isiokwu na-adọrọ adọrọ nke akpọrọ "Lazọ Umengwụ Iji Nwee Lovehụnanya" nke na-akọwakarị banyere anwansi nke mmekọrịta agbatị.
Kedu nke na-ebu ụzọ, ụda ma ọ bụ owu ọmụma? Na nke a research ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-enwekarị owu ọmụma, na ndị na-enwekarị owu ọmụma na-elekarịkwa ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ anya. Nchọpụta ndị a kwekọrọ na nyocha na-ejikọ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji mmetụta / mmetụta uche adịghị mma.
Kedu ihe mmetụta porn na ndị di na nwunye? Lee ụfọdụ ihe si na nchọpụta ọhụrụ dị mkpa Pọl J. Wright duziri:
"Ịhụ foto na-akpali agụụ mmekọahụ iji nwee mmasị mmekọahụ na-enwe mmekọahụ na ịghasị nkwurịta okwu mmekọahụ na-ejikọta na afọ ojuju mmekọahụ."
"A na-ejikarị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-eme ihe dị ka ihe na-akpali agụụ mmekọahụ maka ịkwado onwe ya, otú ahụ ka mmadụ nwere ike ịdaba na ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ndị ọzọ na-akpali mmekọahụ."
"Anyị chọpụtara na ndị ikom na ndị inyom na-ejikarị nkwurịta okwu akpọrọ ihe, enweghị afọ ojuju obi ha kọrọ."
N'April 2017, iwu ọhụrụ ahụ na-akwụ ụgwọ na igbu ọchụ na Scotland abanyela n'okpuru Omume Ọjọọ na Mmekọahụ Mmekọahụ 2016. Ọnwụ kachasị maka ikpughe maọbụ egwu iyi igosi foto ma ọ bụ vidiyo bụ 5 afọ mkpọrọ. Mmejọ ahụ na-agụnye ihe oyiyi e mere na nzuzo ebe mmadụ na-eyi uwe ma ọ bụ naanị uwe ma ọ bụ na-egosi onye na-enwe mmekọahụ. GỤKWUO Ebe a.
Kọmitii na-ahụ maka Education and Skills nke Scottish na-ebipụta akwụkwọ akụkọ banyere Mmekọahụ na Mmekọahụ. Ndị ọkà mmụta ekwuola na ha chọrọ ka nkuzi ha gafee ihe gbasara usoro ndu na ikwu okwu banyere mmekọrịta. Ụgwọ Ụgwọ Ụgwọ ahụ nwere ike inye aka na ngwọta. Onyinye a site na Fund Big Lottery ga enyere anyi aka ime nke a. (Lee n'elu) A ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ gbasara akwụkwọ kọmitii ahụ Ebe a.